अल्कोहलको लत लागेको कसरी थाहा पाउने ?
Home जीवनशैली अल्कोहलको लत लागेको कसरी थाहा पाउने ?
पार्टी, सभा समारोह, साथीभाइसँगको भेटघाटनमा रमाइलो गर्न अल्कोहल सेवन गर्ने धेरै छन् । अल्कोहल प्रयोगलाई रमाइलोका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिए पनि यसले स्वास्थ्यमा भने हानि पुर्‍यारहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा थाहा नै नपाईकन यसको कुलतमा फसिरहेको हुन्छ । तपाईं अल्कोहलको लतमा फसे नफसकेको दैनिक व्यवहारबाट पनि पहिचान गर्न सकिन्छ ।
विकेन्डमा अल्कोहलको प्रयोग
साताको एक दिन मात्रै अल्कोहल प्रयोग गर्दा लत नलाग्ने धेरैमा भ्रम छ । तर, रक्सीको दैनिक प्रयोग मात्रै कुलत होइन । यदि प्रत्येक साता बिदाको अवसरमा अल्कोहल प्रयोगमा ल्याइन्छ भने त्यो पनि लत नै हो । यस्तो लत कम गर्न अल्कोहलयुक्त पार्टीको सट्टा फिल्म हेर्न जाने, आफन्त वा परिवारसँग बसेर खाना खाने, कसैलाई भेटेर कफी खानेजस्ता क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ ।
आवश्यकता बढ्दै जानु
अल्कोहल प्रयोग गर्दै जाँदा बिस्तारै सुरुवातीमा भन्दा यसको मात्रा बढी लिने बानी पर्छ । यसको अर्थ शरीर बढी रक्सी पिउन अनुकूल हुँदै गइरहेको छ । अर्थात् नशाले शरीरका अंगहरूमा अल्कोहलको प्रभाव पर्न सुरु भइसकेको छ । बिस्तारै शरीरमा रक्सीले छाड्दै गएपछि फेरि तलतल लाग्ने हुन्छ । जुन राम्रो लक्षण होइन ।
अनिद्राको मुख्य कारणमध्ये अल्कोहल प्रयोग पनि एक हो । थोरै मात्र भए पनि रक्सी प्रयोग गरेपछि मात्रै निद्रा पर्छ भने त्यसले शरीरलाई पूर्ण आराम दिँदैन । गहिरो निद्राले शरीरलाई रिचार्ज गर्ने गर्छ, जुन अल्कोहलपछिको निद्राबाट प्राप्त हुँदैन ।
बाहिर पार्टी वा भोजभतेरमा गएर रक्सी सेवन गरिसकेपछि त्यहाँ के भएको थियो भन्ने याद नहुनु अल्कोहलको नराम्रो असर हो । यो अवस्था भनेको रक्सीले स्मरण क्षमतामा असर पुर्‍याउनु हो । रक्सीको मात्रा बढी भएर शरीर र दिमागमा एकैचोटि असर पार्ने हुँदा ब्याल्याकआउट हुने गर्छ, जसले गर्दा व्यक्तिलाई स्मरण रहँदैन ।
कर्तव्यविमुख बन्दै जानु
दैनिक क्रियाकलापभन्दा रक्सी पिउनमा बढी ध्यान जानुले रक्सीको लत लागेको जनाउँछ । अल्कोहलको अत्यधिक प्रयोगले ह्याङओभर रहने हुँदा दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको हुन्छ । जसले तनाव उत्पन्न हुने र फेरि अल्कोहल सेवन गर्न मन लाग्ने हुन्छ । जुन कुलतमा परिणत हुँदै जान्छ ।
रक्सीले तनाव घट्छ भन्ने भ्रम
लामो समयसम्म रक्सी सेवानपछि धेरै मानिसमा रक्सी पिएर मात्रै तनाव कम हुन्छ भन्ने भ्रम पर्न थाल्छ । तर, यसले बिस्तारै अत्यधिक रक्सी पिउने बानी पर्छ । कुलतकै कारण दैनिक काम प्रभावित हुन थाल्छन्, बिस्तारै एन्जाइटी र डिप्रेसनको समस्या बढ्दै जान्छ ।
अर्काको नजरमा पर्नु
रक्सीले शरीरमा प्रभाव पार्न थालेपछि शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर महसुस हुन थाल्छ । दैनिक क्रियाकलापमा सहज नभइने हुँदा अर्को व्यक्तिले नोटिस गर्ने गर्छ । बिरामी देखिने, काममा ध्यान केन्द्रित गर्नै नसक्ने, एन्जाइटीको समस्या देखिने, आफन्त र साथीभाइबाट टाढा बस्न मन लाग्नेजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । तसर्थ कहिलेकाहीँ गरिने अल्कोहलको प्रयोग पनि रक्सीको कुलत बन्न सक्छ ।
खबर वाइड संवाददाता - २०७७, १७ चैत्र मंगलवार १०:४८ 0
बुटवल, २१ असोज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले लुम्बिनीमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्य गरेर खडैयामा अस्पताल निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो...
झाडापखाला फैलिएपछि कृष्णपुरले प्रदेश सरकारसँग माग्यो गुहार
काठमाडौं, २० असोज कपिलवस्तुको कृष्णपुर नगरपालिकाका तीन वटा वडामा झाडापखाला फैलिएपछि नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले लुम्बिनी सरकारसँग गुहार मागेको छ । झाडापखलाबाट दुई जनाको मृत्यु हनुका...
ललितपुरमा १८ वर्षमाथिका सबैलाई आजदेखि भेरोसेल खोप लगाइँदै
काठमाडौं, २० असोज ललितपुरमा आजदेखि १८ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले तोकिएका खोप केन्द्रबाट १८ वर्षमाथिका सबै...
Uncategorized ईश्वर प्रसाद रिमाल -सम्वाददाता - २०७७, १७ चैत्र मंगलवार १०:४८ 0
homelike residence of his own rear to be alwaysafamily group of services and products, reports Morgan The house might be children of prayer,...